केटा मान्छेले से’क्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति « गोर्खा आवाज
केटा मान्छेले से’क्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति
१२ पुस २०७६, शनिबार ००:००
एजेन्सी । यौ’न जीवन अर्थात् से’क्स । कसैले मन पराए पनि या नपराएपनि यो जीवनको एउटा वास्तविकता हो । एउटा सत्य चाहिँ के हो भने से’क्स जीवन या मानिसको यौ’न जीवनले उसको जीवनका अन्य पक्षहरु सोझोरुपमा प्रभावित गरेको हुन्छ । नेपाली समाज, महिलाहरु त्यसैपनि खुल्न सक्दैनन । मन भएपनि चाहना भएपनि उनीहरु खुलेर यौ’नक्रि’यामा सहभागी हुन सक्दैनन । मन उनीहरुलाई पनि हुन्छ तर कमै मात्र महिला वा’इल्ड बन्न सक्छन । अनि यसो हुँदा पुरुषलाई नी’ला चलचित्रकाे सम्झना आउँछ ।
ओहो, यसरी कम्मर हल्लाउनुपर्ने, यसरी चा’क उ’फार्नु पर्ने । उसले त्यो पाउँदैन । अनि सोच्छ, मेरो पा’र्टनर त लेजी, इ’नएक्टीभ । तर यो सत्य हुँदैन । महिलाले व्यक्त गरेपनि या नगरेपनि उसले यौ’न आ’नन्दको मजा लिइरहेकी हुन्छे । समस्या के हो भने नी’लो चलचित्र जस्तो ऊ खुल्न भने सक्दिन । यो अवस्थामा केटा मान्छेले केही गल्ती गर्ने गर्छन । त्यो यौ’न जी’वनलाई निरश बनाउन पुग्छ ।
१. तुलना गर्नु – केटा मान्छेले से’क्स गर्दा चलचित्रको दृश्य या आफूले सम्झेको कुनै महिलालाई यौ’नसँग जोड्छन । यो नितान्त गलत हो । कतिपय केटाहरुले पा’र्टनरसँग से’क्स गरेका हुन्छन् तर सम्झिन्छन् अरुलाई । ऊ मेरो मुनि छ, उसको ‍‍‍‍… यस्तो, उसको .. यस्तो, उ अहिले भएको भए यसरी से’क्स हुन्थ्यो आदि इत्यादी । तर यो सोच्नु घातक हुन्छ । से’क्स गर्ने बेला आफ्नो पा’र्टनरमा मात्रै सीमित हुनुस् ।उसलाई मात्रै दि’मागमा राख्नुस् । यसले धेरै फरक पार्छ । अपनाएर हेर्नुस् ।
२. इच्छा नबझ्नु – महिलाहरुको यौ’न मनो’विज्ञान जटिल हुन्छ । उनीहरु एकैछिन् पुरै से’क्स गर्न चाहने हुन्छन्, एकैछिनमा प्या’सिभ हुन सक्छन् । त्यसैले उनको मु’ड अनुसार आफूले व्यवहार गर्नु जरुरी हुन्छ । जस्तो से’क्सको बेला पा’र्टनरलाई यौ’नाङ्ग नचलाए हुन्थ्यो लाग्न सक्छ । या दू’धमा कि’स नगरे हुन्थ्यो लाग्न सक्छ या या दू’ध बेस्सरी मा’डे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । यो इच्छा बुझ्न् जरुरी हुन्छ । इच्छा बुझेर सोही अनुरुप व्यवहार गर्न सकियो भने महिला पूर्णरुपमा समर्पित हुन सक्छन् । यो कुरा विशेष ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
५. से’क्स’पछि… – से’क्सप’छि केटा मान्छेलाई कुरा गर्न मनपर्छ । जबकि पूर्ण सन्तुष्ट भएको अवस्थामा केटी भने सुत्न चाहन्छ । तर केटा मान्छेले से’क्सपछि कस्तो लाग्यो, स’न्तुष्ट भयौ नि…. आदि इत्यादी सोध्ने गर्छन् । यो सरा’सर गलत हो । केटी मान्छे समाजमा दोश्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ । उनीहरुको मनो’विज्ञान ल’ज्जालु छ । त्यसैले यस्तो प्रश्न केटीले मन पराउन्न ।
से’क्स भयो त भयो, त्यो कुरा घरि’घरि के गर्नु लाग्छ उनीहरुलाई । त्यसैले से’क्स गरेपछि जीउ जोडेर एकछिन सुस्ता’उनुस् । केही नबोल्नस् । हा’तले दू’ध चलाउनुस् । मुसा’र्नुस् । मा’या गर्नुस् तर केही नबोल्नुस् । अनि माया’लुसँग एकछिन टाँस्सिएर सुत्नुस् । यी माथिका कुरा लगु गर्नुहोस तपाईको यौ’नजी’वनमा ग्र’हण लाग्न छैन ।